U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 17th round of Myanmar-India Foreign Office Consultations (FOC) – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 17th round of Myanmar-India Foreign Office Consultations (FOC)
A Myanmar delegation led by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 17th round of Myanmar-India Foreign Office Consultations (FOC) held in New Delhi, India on7June 2018 and arrived back to Yangon in the morning of9June 2018.
U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Mr. Vijay Gokhale, Foreign Secretary of the Ministry of External Affairs of India co-chaired the FOC, which was held at the meeting hall of the Taj Mahal Hotel in New Delhi at noon on7June 2018. The Myanmar delegation comprising of U Myit Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, U Moe Kyaw Aung, Myanmar Ambassador to India and responsible officials from the Ministry of Foreign Affairs and the Myanmar Embassy in New Delhi attended the FOC while the Indian delegation was led by Mr. Vijay Gokhale, Foreign Secretary of the Ministry of External Affairs.
At the Foreign Office Consultations, both sides extensively discussed wide range of matters pertaining to the promotion of the bilateral relations and multi-faceted cooperation including security and defence cooperation, boundary and border matters, development cooperation, promotion of trade and investment and consular and cultural cooperation as well as potential areas of future cooperation between the two countries.
Dated,9June 2018
၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူ ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၁၇)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီတွင် နယူးဒေလီမြို့၊ The Taj Mahal ဟိုတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ (၁၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale တို့က ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာဘက်မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယူးဒေလီမြို့၊ မြန်မာသံရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အိန္ဒိယဘက်မှ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale နှင့် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၃။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် ကိစ္စရပ်များနှင့် နယ်နိမိတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး၊ ကောင်စစ်ရေးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများ အပါအဝင် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ရှေ့ဆက်အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နယ်ပယ်များအပေါ် နှစ်ဖက်ကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်